Etu esi achọta Sugar papa, mama, nwa, Instagram, Facebook ⋆ Sugarlove ™
Etu esi achọta Sugar Daddy, Mama, Baby, Instagram, Facebook
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị
Instagram na / ma ọ bụ Facebook
Sugar Daddy, Momma & Baby na Instagram & Facebook Social Media & Weebụsaịtị njikọ
Na agbanyeghi na enwere nne shuga, mama, na webusaiti umu aka na ngwa, ụfọdụ shuga nnabata, obi, na ụmụ aka ka masịrị ndị mmadụ na ntanetị ọdịnala ọdịnala, na Instagram nọ na elu ndepụta ahụ. Na ohere gbanwere na ị bụ nwa shuga na-anwa ịchọpụta ezigbo shuga nna ma ọ bụ mama iji jikọọ, n'oge ahụ, ị ​​ga-agbasawanye mbara gị site na ịgagharị na Instagram.
O nwere ihe karịrị nde mmadụ 800 na Instagram, n'ezie ọ bụghị nnweta shuga na mamas bara ụba ma nweela ego ha ga-emefu. Ihe ọzọ dị mkpa gbasara mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke Instagram bụ na O siri ike iduhie gị n'ihi eziokwu ahụ bụ na ị gaghị enweta shuga nna na shuga mama. Na agbanyeghị nke a, ị ga - enweta ohere iji kirie eserese na eserese vidiyo na-akwado ezi agwa nke nna gị na mama gị.
Onwere ndi mmadu ole na ole matara banyere nmekorita shuga nke ndi Instagram, obuna ndi maara ihe n’eji otua. Na post a, anyị ga-atụle usoro kacha mma ị ga - eji chọta papa papa, mama na nwa ịchọrọla kemgbe.
Mee ezigbo profaịlụ
Nke a bụ iji dọta ma gosi na ị bara uru. Nna shuga na mommas chọrọ inweta ụmụ nwoke / ụmụ nwanyị shuga na-eto eto ha nwere ike ị forụrị ọ forụ ma gosi ndị ọzọ n'ihu ọha. Wepụ ụfọdụ mbọ iji mee ezigbo profaịlụ. Nsogbu bu na O / ya echezighi echebara profaịlụ gi n'anya ma o buru na O chere na abughi udiri ya. Na agbanyeghị nke ahụ, ọnọdụ mmekọrịta gị ga-abụrịrị otu, ebe Sugar daddies na mamas nwere ike bụrụ ekworo n'ezie. Ha kwesiri inwe ha nile maka onwe ha, profaịlụ gi gha ekpughere ha ihe ha nwere ike.
Instagram yiri mkpokọta foto na weebụ, yabụ rite uru na nke a. Hotshot gị ọkụ / àgwà, egosipụta ihu gị ụtọ na posts snaps na-eme ka ị itule n'akụkụ ọ bụla. Dị njikere na ị bulite foto na vidiyo kachasị mma gị.
Jiri mkpado hash iji mee ka uru ị bara ghara ịba uru
Choo isi okwu ndi n’eme ka mmuta shuga di na mama. Iji maa atụ: #sugardaddy, #sugarmama, na #sugarbaby foto na vidiyo, na ndị ọzọ. I nwekwara ike ime nyocha doro anya na ohere ị na-achọ maka nnabata shuga, mommas na ụmụ ọhụrụ si n'otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nọ n'Atlanta nwere ike ịga maka 'sugar sugar Atlanta'. Na mgbakwunye, Gaa na akara ngosi hash dị na posts gị. Iji maa atụ, ọ mara ihe karịa iji #singleandsearching karịa idepụta 'Alụbeghị m nwanyị ma na-achọ onye ga-eme ka m nwee obi ụtọ n'ime'
You ga-ahụ ụyọkọ profaịlụ mgbe ị na-achọ ihe mkpado Hashh ziri ezi. Chọọ ndị ị na-anụ ụtọ. Gbalịa ka ị ghara imesi ya ike ma ọ bụrụ na ndepụta ndị gị na ya na-aga n'ihu, ị nwere ike igbochi onye ọ bụla nke na-amalite itinye ihe ị na-esoghị.
Bido n’enwe mmasị na ịza ajụjụ na post ha on Facebook & Instagram
Ngosipụta nke ịmụrụ anya ebe a. Gbalịa ka iwe we gị. Inwere ike tufuo ya / ya ozo. Naanị jụụ ma mee nwayọ. Na-amasị ma na-ekwu banyere posts ha na-akpali akpali. Ọ bụghị ọ bụla post ha. Ha nwere ike bido inyeghachi ihu ọma oge ahụ, n'oge ahụ ị nwere ike iwere ya ntakịrị site na ịkọwa na emojis ma na-akpado ha na posts gị na ịkọwa na ịchọrọ ihe dị omimi karị na Facebook & Instagram.
Malite mkparịta ụka
N'oge a, ha nwere ike nwee obi ụtọ ịgwa gị okwu. N'ọnọdụ ọ bụla, agwala ya n'ụzọ na-adịghị mma ka ọ bụrụ nna gị ma ọ bụ nna gị shuga n'agbanyeghị mkparịta ụka ahụ gara n'ụzọ ahụ. Kama, rịọ ha ka ha bụrụ enyi. Gosiputa mmasi na ndu ha, ihe ha na ekwu, ihe omume ha, ihe ndi di anyi nma na ihe adighi adighi ha nma. Soro ha kparita ụka ogologo na nke miri emi.
Nke a nwere ike iwe oge ụfọdụ, ma emesịa; ọ chọrọ otu ntachi obi. Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-emezu ihe mgbaru ọsọ gị na ohere ọ bụla na ị na-egwu kaadị gị nke ọma.
Can nwere ike ịkpọ ya / ya gaa oriri na ọ .ụ .ụ. Ziga ha ozi dika “aga m eme oriri na ngwụcha izu a. I gha abia. ”Ee, bido ya n'ụzọ, ekwesighi ịjụ ya / nwanyị. Na Facebook & Instagram wepụta ajụjụ a dịka “you ga - achọ ịbịa?” N'akụkụ usoro ndị a, i ji n'aka na ọ ga - abịa, yabụ ihe ọ ga - ekwenye bụ na ihe mere ya / ọ nwere oge ịga
Sugarmụ shuga dị mma n'anya, yabụ hụ na nna na mama nwere ike ịnọnyere gị ga-enwe oge dị mma. Dịka iwu, unu abụọ agaghị ebu ọnụ ozugbo.
First ga-ebu ụzọ rie nri abalị, kwuo okwu ma were ya si ebe ahụ zoo ma ị zukọta ọzọ ka ị ga-emekọ ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị.
N'ụzọ dị otu a, na-egosipụta echiche ziri ezi mgbe niile. Nnukwu shuga na mamas dị iche iche chọrọ enyi na-ahụ n'anya ma nwee obi ụtọ, yabụ bụrụ otu mgbe.
Kpebisie ike na ị gaghị ewepụ enweghị nchekwube. Ekwula mkpesa ma ọ bụ mee mkpesa na Facebook ma ọ bụ Instagram
Ugba shuga papa m / mama chọrọ onye ga - anụ ya ma ọ bụ mee ka ọ dị mma karịa, yabụ atụkwasị ya obi na mmụọ
Na-eme Onwe Gị na Facebook & Instagram
Sugarmụ shuga dị ike, maa mma ma nweekwa onwe ha n'otu aka. Enweghị ike ijide gị nke ọma n'ihi eziokwu ahụ na ị ghọtara ihe ịchọrọ nke na-eme ka ị nwekwuo mmasị na shuga nna na ike mamas.
Papa daddies na mommas chọrọ shuga nke shuga na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ma ha ghọtara na ohere ị nwere na ndụ ị ga-ebi na Facebook & Instagram.
Na ohere ọ bụla na ị na-agbachi mbọ ike ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile, a ga-ewepụ ya. N'ụzọ dị otú a, gwuo egwu dị jụụ ma nọrọ onwe gị.
One response to “How To Find Sugar Daddy,Mama,Baby,Instagram,Facebook”
ratankingstar ekwu, sị:
2019-09-14 na 5: 09 am